5 Best Saffarada Day inay ku socdaalaan tareenka From Paris | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Saffarada Day inay ku socdaalaan tareenka From Paris
Fikirka dhaco iska dhawr maalmood? Maxaa ku saabsan qorshaynta qaar ka mid ah safarada maalin inay ku socdaalaan tareenka ka Paris? Faransiis tareenada waa la soomo, fudud oo soo kobcaya, saaxiibtinimo si ay hareer ee France. Iyadoo Save A tareenka, aad u yeelan doontaa in ballan ku daqiiqo oo aan ajuurada ku daray, sidoo kale! score!
Paris waxaa aad u wanaagsan ku xiran oo dhan ee France iyo mahad tareenada TGV (Tabobaro Grande Vitesse a) qaar ka mid ah 5 safarada maalintii ugu fiican ka Paris waa u suurtoobaan in 4 saacadood ama wax ka yar! Halkan waxaa ah cilmi-baaristeena ku saabsan safarrada ay tahay inaad tixgeliso sameynta markaad u safraysid Paris.
1. Safarada inay ku socdaalaan tareenka Marseilles (Provence-Alpes-Cote d'Casuur)
Haddii aad raadinayso cararaan qoraxdu ka soo Paris, Marseilles waa meesha si ay u tagaan. Better u dhaqmaan si dhakhso ah in kastoo, ah maalmaha qoraxdu loo dhammaado dhaqsaha badan soo socda doono. Marseilles muuqataa fog on map-ka, laakiin Paris si Marseilles waa kaliya 3.5 saacadood tareen la TGV ah. Marseilles, in Provence-Gobolka Alpes-Cote d'Casuur, waa qayb ka mid ah Faransiiska ah Faransiis. Dad badan ayaa soo booqan Marseilles si deg deg ah si ay u dhiibtay Island, laakiin magaalada waa meel qabow si ay u sahamiyaan on gaar ah.
Waa maxay sababta aad soo booqato Marseilles?
The cimilada in Marseilles waa weyn oo lagu daray waxaa jira waxyaabo badan oo si aad u aragto oo aad yeeshaan magaalada. Central Marseilles xoogga badan oo indhaha ku ah magaalada, sida picturesque Old Port ah. Marseilles dekedda qaab weyn ayaa Ganacsi waayo, 2,600 sano iyo ka badan waa degmada oo dhan ka badan hal hortiisa a.
On saddex dhinac yihiin quays la promenades ballaadhan ku lifaaqan bakhaarada inta badan 18-qarnigii hore.
Waxa ay u muuqataa sida ku dhowaad mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay cafe, kalluunka makhaayad ama qataara, dabaqa dhulka ay, la kuraas debedda, si aad u arki karto nolosha magaaladan faraxgelinta fur sida aad nuujiso pastis a.
warshadaha ayaa muddo dheer u dhaqaaqay ka guraan oo casri ah si ay u guraan u waqooyiga, iyo in ka badan doonyaha dekedda jir waa raaxo loogu talagalay.
Laakiin ugu hooseeya Quai des Belges, qabsado ugu dambeeyay ayaa weli xeebta keenay in la iibiyo suuqa kalluunka biyaha subax kasta.
Safarka maalintan ee ka socda Paris waxaa lagula talinayaa in lagu sameeyo tareen.
Basilica ee Our Lady of Ilaalada
Waa adag tahay inuu seegi doono Taalladaas goor wanaagsan kor skyline ee xagga koonfureed oo dalka Port Hore.
Waa a 19-qarnigii neo-Byzantine kaniisadda 150 mitir biyaha ee kor ku xusan, oo leh taallo weyn oo dahab ah oo bikrad ah iyo Child ugu sareysa ee ay munaaraddii si aad u daawato ka badan bulshooyinka badda Marseilles.
Waxaa jiray meelaha quduuska ah diinta, iyo qalcadahaba on La Garde qarniyo badan, iyo Basilica ee lagu daro heerarka hoose ee hormariyo qalcado in sidoo kale ka mid ah goobta cibaadaysiga.
fuulid waxaa ma in la qaado khafiif ah ee xagaaga, laakiin waxaa jira a tareenka dalxiiska fogaadaan joogto ah ka Port Hore.
Baahnayn in la sheego, ah muuqaal ka halkan waa daanka-go'in.
Paris si Marseilles by tareenka
Marseilles waxa uu ku yaalaa at 773 km koonfur ka xigta Paris. Paris si Marseilles safarada inay ku socdaalaan tareenka waa mid aad u fudud. tareenada Direct Paris si Marseilles tago Paris Gare de Lyon safarka ah 3.5 saacadood. Haddii aad u safrayso Marseilles on maalmaha fasaxa xagaaga waxaan ku talinaynaa tayaasha tigidhada tareenka fiican ka hor.
2. BOOQO Rouen (Normandy)
Waxay ku taallaa oo webiga ag uu, Rouen waa safar maalin dhaw ah oo ka socda Paris waana caasimada maamulka ee Normandy. "Magaalada naaneeso 100 munaaradaha dawan”. Rouen leedahay taariikhda hodanka ah, matxafyada xiiso leh, oo wanaagsan hudheellada.
Rouen waa mid ka mid ah ugu quruxda badan gaaban 5 safarada maalintii ugu fiican inay ku socdaalaan tareenka ka Paris. Sababtoo ah halka ay masaafo gaaban caasimada (126 km), dad badan booqo Rouen on safar maalin ka Paris laakiin tani waa magaalo u qalmaa in ka badan dhowr saacadood.
Haddii aad rabto inaad aragto qaar ka mid ah jardiinooyin botanical, waxay leeyihiin saldhig ka kaas oo ay ku sahamiyaan buuraha diidanaa oo ka mid ah gobolka Normandy, ama aad dooneysid uun in dhaqso ah cityscapes qaar ka mid ah (complete la guriyo alwaax-duniyooyinka), ma jirto beenin in Rouen waa cajiib quruxsan!
Art Muuqaal The
Inta taariikhda, magaalada ayaa si wanaagsan loo diiwaangeliyaa isagoo heer sare ah goobta farshaxanka, wax taas oo weli waa run ilaa maantadan la joogo. Inta lagu jiro qarnigii 20aad, kooxaha Claude Monet, iyo sidoo kale qaar kale oo badan, dhiiratay in magaalada iyo Xitaa waxyoonay rinjiga magaalada.
Hadda, badan oo ka mid ah waddooyinka Rouen ee weli pedestrianized, taasoo la micno ah in cabbayso iyada oo magaalada si dhab ah ayaa dareensan in ka dhigan tahay sarre u soo laabtay markii. No baabuurta, haad cobbled, aagga dekad, iyo xataa degmada qadiim ah: waxa aan u jeclaadaan? Booqo Rouen inta lagu guda jiro June-September iyo aad doonaa xataa in loola dhaqmo si ka bandhigay nalalka free at cathedral marka qorraxdu dhacdo iyo nooc fiid in.
Paris si Rouen by tareenka
Rouen waxa uu ku yaalaa at 126 km ka Paris. Paris si Rouen safarada inay ku socdaalaan tareenka waa mid aad u fudud. Oo tababartay Paris fasaxa Rouen Paris Saint Lazare Tareenka Station saacadoodba. safar wuxuu qaadanayaa 1s 15 min inay 1s 45 i, ku xiran tahay tareenka.
3. BOOQO Lyon (Auvergne - Rhône Alpes)
Lyon, magaalada saddexaad ee ugu weyn waddanka France, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu sareysa si ay u booqdaan ee France. Magaalada ayaa waxa si fiican u yaqaan for ay tayada nolosha, kaasoo ah dhaxalka ugu qurux badan ka jeer Roman si Contemporary naqshadaha, iyo hudheellada wanaagsan.
Waa maxay sababta aad soo booqato Lyon?
Lyon waa mid ka mid ah ugu magaalo qurux badan in France, iyo sida oo kale waxay leedahay toban kun ah hawlaha inay ku raaxaystaan. Fourbiere Hill dalabyo views qurux badan dusha magaalada oo waa meel fiican si ay u bilaabaan booqashada. Baadh Vieux Lyon, xarunta taariikhiga ah ee magaalada iyo qalbigiisa ku garaaceen, iyadoo xiiso leh Dr Makumbe iyo in hormariyo dalka naqshadaha iyo jawi fiican. Ka dib markii helitaanka dhadhansiinno Dadka cunnada ay caanka Lyon ee, waa waqti ay u jiheysan Peninsula ah (Lyon ayaa u saarney webiga-ku xidhay) waayo, naqshadaha more qurux badan iyo qaar ka mid ah shopping fiican.
Lyon waxa uu ku yaalaa at 463 km ka Paris, safarka maanta ka socda Paris, Waxaan ku bari doonaa Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Faransiiska taas oo aad uga duwan tan Paris. Paris si Lyon safarada inay ku socdaalaan tareenka waa soomi. Oo tababartay Paris fasaxa Lyon Paris Gare de Lyon saacadoodba muddo ah safarka ku dhawaad 2 saacadood, ku xiran tahay tareenka.
4. BOOQO LA Rochelle (Aquitaine cusub)
LA Rochelle iyo jasiiradaha ay tahay magaalo ka mid ah in ka badan kun sano jir mustaqbal u soo jeestay! Naalaa qalbiga baxday inka badan Atlantic ah, magaalada ayaa loo bedelay salkeeda badda galay dhaqaale weyn, hantida dalxiiska iyo dhaqanka, iyadoo la sii quruxdiisa gaar ah.
Waa maxay sababta aad soo booqato La Rochelle?
Laga soo bilaabo Port Hore, mid ka mid ah u bogi karaa oo keliya munaaradaha haybad, ee masuulka ka ah ee magaalada. Isagoo ku sii jeeda Atlantic ah, ay goob joog ka xoog, iyo maal ee La Rochelle iyada oo qarniyo ka. Kuwani qalcad ah badaha, dhisay qarniyadii dhexe oo maanta lagu tilmaamay inay Historical taxadiri, Istaaga marka aad booqato La Rochelle. Dhinaca kasta oo laga galo dekedda, ee Saint-Nicolas Tower, iyo Munaaradda Chain ku xiran yahay in ay derbi by. Ugu dambeyntii, waxaa jira ee Tower of siraad ah, hore tusaaale iyo xabsiga.
Booqo de Ile Dib:
The Bois-Plage-en-Re ku yaal South Coast ee jasiiradda waa mid ka mid ah da'da weyn ee jiga badda xeebteeda ee France. Open in badda, Magaalada waxa uu ku faanaa tayada ay xeebaha. Waxaa lagu abaal Flag Blue 2015 (calaamad of xeebaha dayan). Booqo tuulada iyada oo ay fuuli jiray luuqyo iyo jidadka, ulana iyo jiidh leh hollyhocks laga billaabo May illaa September.
Paris in La Rochelle by tareenka
La Rochelle waxa uu ku yaalaa at 469 km ka Paris. Paris in La Rochelle safarada inay ku socdaalaan tareenka waa u fududahay. tareenada TGV Direct fasaxa La Rochelle ka Paris Gare de Montparnasse iyo link Paris in La Rochelle in kaliya 3 saacadood.
5. Our Choice Last in Saffarada inay ku socdaalaan tareenka DEAUVILLE (Normandy)
Deauville la helay xeebta Normandy, ku xiga si ay Trouville iyo koonfur-galbeed ee Honfleur. qayb ka mid ah 'Normandy Riviera' Deauville waa badda agteeda qurxoon magaalada. Waxay leedahay xeeb aad u weyn, Guryahan waaweyn, dukaamo weyn, oo sanadle ah film Dabaaldag. In aan ku xuso ay caan tartanka-track, Dabcan golf iyo sidoo kale casino. Maxay ka badan aad rabto in aad laga yaabaa inuu?
Deauville waa musharrax weyn oo safar maalinle ah ka socda Paris, nolosha bilaabay sidii aragtida nuska walaalkiis Napoleon kii saddexaad. Laga soo bilaabo magaalada ku xeeran ee Trouville, wuxuu eegay guud ahaan biyagaleenka ahuba iyo qaar dhoobo iyo go'aansaday in la dhiso a tartanka-track. Villas xarrago la dhisay dhexeeya tartanka-track iyo badda iyo Deauville waxa uu ku dhashay.
Inkasta oo markii hore la aasaasay iyo in la horumariyo in qarnigii 19, waxa uu ahaa qarnigii 20-ka hore in la ruxruxo labaad ee horumarinta ka dhacay Deauville. Tani waxaa ka mid boardwalk caanka xeebaha, casino casri ah, iyo hotels grand. Hotel Normandy iyo Hotel Royal, iyo Dabcan golf ah.
Paris si Deauville by tareenka
Deauville waxa uu ku yaalaa 220 km galbeed ee Paris. Paris si Deauville safarada inay ku socdaalaan tareenka waa run ahaantii si sahlan. Direct Tababar Paris fasaxa Deauville Paris Saint Lazare saldhigga tareen saacaddiiba iyo safarka tareenka socdaa 2 saacadood.
Waxaad dhahdaa haa (Haa ee French) si ay u 5 safarada maalinlaha ee ugu wanaagsan ee Paris oo loogu safro tareen iyadoo la kaashanayo Save A tareenka! No dheeraad ah, ajuurada qarsoon, buunbuuninayo ma. Just xiiso leh!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Saffarada Day inay ku socdaalaan tareenka From Paris” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-travel-train-paris/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ru si / de ama / NL iyo luuqado badan.
#daytrip #Fasaxyada Faransiiska #paristrips #quicktrips #tripsfromparis europetravel longtrainjourneys talooyin tareenka tareen safarka